Saliidaha Dabiiciga ah ee lagu Daaweeyo Neefta - Aayaha
Home CAAFIMAADKA Saliidaha Dabiiciga ah ee lagu Daaweeyo Neefta
Saliidaha Dabiiciga ah ee lagu Daaweeyo Neefta
Asma waa cudur qoto dheer oo ku dhaco hawo mareenada sambabaha. Hawo mareenada ayuu ka dhigaa kuwo bararan., Taas ayaa ka dhigaysa mid adag in hawada ay u gudubto islamarkaana qofka neefsado.
Sida laga soo xigtay The American Lung Association , ku dhowaad 26 milyan oo Maraykanka ayaa qaba neefta, oo ay ku jiraan in ka badan 7 milyan oo carruur ah. Waa sababta saddexaad ee ugu badan carruurta isbitaalada la geeyo.
Ma jirto daawo neefta waqti xaadirkan, laakiin waxaa jira qorshe daaweyn badan oo ka caawin kara dadka inay nolol caadi ah ku noolaadaan.
Inkasta oo ay jiraan noocyo kala duwan oo daawooyinka neefta , dadka qaar waxay door bidaan fursadaha daaweynta dabiiciga ah.
Dad badan oo raadinaya daawayn caadi ah oo wax ku ool ah ayaa u jeestay in ay saliidaha lagama maarmaanka ah isticmaalaan.
qormadaan waxa ku eegi doonaa isticmaalka saliidaha lagama maarmaanka ah si loo daaweeyo cudurka neefta:
Saliidaha dabiiciga ah ee neefta:
Awoodaha ku daweynta saliidaha dabiiciga ah maarmaanka ah ma aha wax hadda cusub islamarkaana dadka qaarkood oo qaba neefta ayay caawisay.
Saliidaha soo socda qaar ka mid ah ayaa leh cadaymo muujinaya inay faaido caafimaad u leeyihiin dadka qaba neefta:
Peppermint: Mid ka mid ah sababaha caadiga ah ee neefta waa xasaasiyadda in ay kiciyaan . Peppermint waxay kaa caawin karta in ay joojiyaan xasaasiyada jirka. saliida peppermint waxaa ku jira waxa loo yaqaan methanol oo kaa caawin karaan sanka xirma ama xidhmey, si dadka qaba xiiqda ay si fiican u neefsadaan.
Lavender: saliidda Tani muhiimka ah waxaa loo isticmaalaa noocyo kala duwan . Waxay leedahay dejin dabiici ah iyo sifooyin ka hortaga ah-oo kaa caawin kara dadka qaba bararka caabuqa neefta .
Eucalyptus: baarayaasha ayaa soo jeedinaya in saliida eucalyptus laga yaabaa in ay ku jirto maadada ka hortaga -bararka.
Saliida geed Shaaha: saliidda Tani muhiimka ah waxay ka caawinaysaa inay yarayso bararka. sidaas awadeed, saliid geed shaaha waxay yareeysa xasaasiyada jidhka.
Chamomile Roman: saliid kale oo muhiim ah waxay la dagaalanta-bararka. Waxa kale oo ay kaa caawin karta qayb ka mid ah sambabada oo loo yaqaan the bronchus inay dejiso iyo sidoo kale qufac yaraynta.
Halista iyo tixgelinta:
Dadka waa in had iyo jeer taxaddaraan marka la isticmaalayo saliidaha dabiiciga ah lagama maarmaanka ah. Waxa laga yaabaa inay u fiicneen qof kasta oo qaba neefta .
Saliidaha qaarkood waxay leyihiin suur xoog badan oo dhalin kara calaamadaha xanuunka neefta iyo waxay keeni karaan in neeftu kuugu kacdo dadka si fudud u dhibsada suurta xoogan ama kiimikada.
Previous article5 Qaab oo dabiici ah oo lagula dagaalamo Shiirka Afka
Next articleDaawo Sawirrada: Nin iska jaray Sanka iyo Dhagaha si uu ugu ekaado Reer Aakhiraad
Haddii Aad Caafimaadkaaga Jeceshahay, Talooyinkaan Qaado
Aayaha editor - November 30, 2018 0
1-Ma daryeeelaysaa #Maskaxdaada seexo 8 Saac habeenkii 2-Ma daryeelaysaa #Calooshada ka fagoow cunooyinka qaboow. 3-Ma daryeelaysaa #Beerkaada ha cunin cunooyinka subagga ku badan yahay. 4-Ma daryeelaysaa #Xiidmahada...
3 Ammaan oo nin kasta uu ka rabo xaaskiisa… Ka dhig...
3 Talo Oo Kaa Saacidaya In Lamaanahaaga Aad Ku Qancisid Sariirta
Labo siyaabood oo kulanka sariirta ee waqtiyeysan uu ku hormari karo...
4 Shay Oo Haweeney Kasta Ay Uga Baahantahay Ninka, Da’ Kasta...
5 Waxyaabood Oo Gabar Kasta Ay Ka Fileyso Ninkeeda
5 Qalad Oo Halis Ah Oo Haweenka Ay Ku Sameeyaan Guurka